Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara dị ka 'Adrien'. Anyị Adrien Rabiot Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọgụgụ isi ya na ọgụgụ isi ya n'ọhịa egwuregwu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Adrien Rabiot's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ndụ mbido
A mụrụ Adrien Rabiot na 3rd ụbọchị nke April 1995 na Saint-Maurice, France. A mụrụ ya nna ya bụ Michel Rabiot na nne ya Veronique Rabiot.
Nna nna Adrien, Michel Rabiot bụ onye nwere mmasị n'ịgba chaa chaa nke agụụ ya maka egwuregwu ahụ na-efe efe. N'ihi ya, nwunye ya na nwa ya malitere itinye aka na egwuregwu ahụ.
Ọ bụ naanị ihe gbasara 5 afọ mgbe Adrien mụrụ na Michel Rabiot na-enwe mmasị maka football bụ ihe ziri ezi n'ime ndụ ezinụlọ ya ma chịkwaa ya mgbe e mesịrị. Football ghọrọ ihe gbasara ezinụlọ yana ciment nke na-ejikọta nrọ na ọchịchọ nke ezinụlọ.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Nkeji otu klọb na-eto eto iri na abụọ
Mgbe ọ dị mkpụmkpụ nke 6, a lere Adrien anya dị ka onye tozuru etozu iji nwee asọmpi asọmpi ma debanye aha na klas nke na-eto eto nke Creteil ebe o mere afọ isii ọzọ nke ndụ ya.
Ihe ndị na-eme n'oge ntorobịa ndị na-eto eto na-aga n'ihu hụrụ na o nwere ihe osise na Manchester City, Alfortville, Pau, Pole Espoirs de Castelmaurou na Paris Saint Germain ebe ọrụ ya hụrụ nnukwu ihe.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Bilie Iji Mara Aha
Adrien Rabiot kwagara na Paris Saint Germain Ntorobịa Na Na 2012 wee mee otu ndị otu egwuregwu n'afọ ahụ. Ọ bụ na Paris Saint Germain First Team na Adrien na-arụ ọrụ dị egwu ma na-agba bọl na-eme ka ọtụtụ ndị weere ya dị ka onye French football football nke nwere ike na-eduzi French National football egwuregwu na-eme n'ọdịnihu.
Ọ bụ ezie na ọrụ ya na PSG bụ na enweghị oge egwu, (nke hụrụ na ọ gbazitere na Toulouse), Adrien meriri nnukwu asọmpi na ụlọ ọrụ gụnyere Ligue 1 (2013-2016) Coupe de France (2014-2017) Coupe de la Ligue ( 2013-2017) na trophee des Champions (2015-2017). Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ọrụ nne dị ka onye nnọchiteanya
Nne Adrien, Veronique Rabiot adawo ọrụ maka nwa ya kemgbe ọ nọ na ndị na-eto eto na-eto eto ma mee ka ọ bụrụ onye nduzi nke na-achọ inweta ọdịmma ya n'ebe ọ bụla ọ na-aga.
Nne na-ele anya ịhụ na nwa ya nwoke na-aga ebe ọ bụla ọ na-aga ebe ọ bụ na ọ ga-eme ka Adrien si na Manchester City football football na-egwu ya egwu egwu na ọ ga-esi na PSG pụọ ma ọ bụrụ na a naghị enye ya oge.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ọrịa Nna
Nne nna Adrien, Michel Rabiot, dị mwute ikwu na ọ tara ahụhụ-na ọrịa, ọrịa nke jidere ya tupu nwa ya nwoke ebili.
Michel Rabiot bụ onye ogologo oge PSG nwere ike na-enwe obi ụtọ na arụmọrụ nwa ya na ihe ndị ọ rụzuru n'ubi egwuregwu site n'ịkwaga anya ya ka ọkpụkpụ ndị ọzọ adịghị arụ ọrụ.
N'ikwu banyere ihe ọ na-eche maka ọrịa nna ya Adrien kọrọ na:
"Ọ gwụla ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ọrịa a ị maghị ihe ọ dị. Ọ bụ mmetụta na-agwụ ike. Kemgbe ọrịa strok ya, mgbe m na-apụ n'èzí, m na-alụ ọgụ maka ya. Ọ bụ ya kpọpụtara m football ma ọ maara ya nke ọma. Ọ ka na-arụ ọrụ ya niile, ọ bụ otu n'ime. Mgbe m gwara ya na m na-atụgharị pro m nwere ike ịkọ site na ya anya na ọ dị mpako. "
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ịnyocha maka Nkịta
Adrien nwere mmasị maka nkịta ma ọ bụghị ihere iji wepụ ya na ihe ọ na-eche na ọ ga-abụ nkeonwe. Ee, ọ na-amasị ụmụ nkịta ya buru ibu na agba dị iche iche.
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ọrụ ụwa
Arụ ọrụ Adrien nke mba ụwa bụ ngwakọta nke nkwarụ kemgbe ọ malitere ọdịdị mbụ n Na 13 August 2013 maka otu ndị French n'okpuru-21, malite na 0-0 enyi enyi na Germany na Freiburg.
Ọdịdị nke ụwa nke na-esote ya hụrụ ya edepụtara dị ka onye na-echere ya site na UEFA Euro 2016. N'ikpeazụ, ọ malitere ịmalite ìgwè ndị agha French na 15 November 2016 megide Ivory Coast, ma ọ bụ mwute ka Thomas Lemar dochie ya mgbe 78 minit nke ụlọ 0-0 na-adọta enyi, n'ihi mmerụ ahụ.
Ngwa ngwa ngwa na May 2018, e debere ya na ndepụta Didier Deschamps maka 2018 FIFA World Cup squad. O nyere onwe ya onyinye site na izipu onye nlele ozi email na-achota na ya agagh enwe ike ibanye usoro ihe omumu.
Ọtụtụ na-ele ya anya na ọjụjụ a na-akpọ ka ọ bụrụ na ọjụjụ ịjụ itinye ya na listi njikere, otu ndepụta ahụ e tinyere na UEFA Euro 2016. N'ịzaghachi ná mkpasu iwe nke mkpebi ikpe ya kpatara, Adrien kwuru na:
"Agaghị m ekwe ka ndị mmadụ na-ekwu okwu n'aha m mgbe ọ bịara na mmekọrịta mụ na ndị otu mba France, ọ bụrụ na m kpebiri iwepu onwe m site na ndepụta nke akwụkwọ, ọ bụ n'ihi na m na-atụle nhọrọ onye nchịkwa, gbasara m, ekwetaghị ihe ọ bụla n'egwuregwu. Abụ m onye asọmpi n'obi, mana m bụkwa nwoke, ọ ga-amasị m ka a tụlee m aha a. "
Adrien Rabiot Child Story Plus Ihe na -Ọrụ Mgbasa Ozi Ọha
Maka onye na-ebi ndu nke onwe ya, Adrien's Social media ọrụ nwere ike weere dị ka nkwenye nke àgwà ya echekwa.
The football ọgụgụ isi n'oge a post nwere a whopping ego nke karịrị 70k na-eso ụzọ na Twitter na karịrị 1 nde ụmụazụ na Instagram. Chee echiche banyere otú ndị na-agba ọsọ na nchekwa nwere ike ịbụ, na-eche banyere Adrien na ndị ọrụ mgbasaozi ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Adrien Rabiot Child Story na nkọwa ndị dị omimi. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị agbanweela: Machị 10, 2019